Dowladda Itoobiya oo farriin lama filaan ah soo gaarsiisay Madaxweyne Farmaajo - Hablaha Media Network
Dowladda Itoobiya oo farriin lama filaan ah soo gaarsiisay Madaxweyne Farmaajo
HMN:- Dowladda Itoobiya ayaa farriin lama filaan ah soo gaarsiisay dowladda cusub ee uu hoggaamiye Maxamed Cabdullaahi Farmaaji, waxayna noqoneysaa middii ugu horeysay ee noocaan ah oo ay dowladda soo gaarsiiso.
Dowladda Itoobiya ayaa midda Soomaaliya u sheegtay inay dhammaan ciidamada Itoobiya ee ku sugan Soomaaliya, gaar ahaan kuwa aan ka midka aheyn AMISOM ay kala bixi doono gobolada ay Soomaaliya kaga sugan yihiin, wuxuuna go,aankaas noqon doonaa mid aan laga laaban doonin.
Farrintaan ayaa waxaa dowladda Farmaajo soo gaarsiisay Ra’isulwasaaraha Itoobiya, wuxuuna u sheegay inay ciidamadooda kala bixin doonaa guud ahaan gobolada, taasina ay tahay dib u habeyn lagu sameyn doono ciidamada Soomaaliya ka joogo, iyadoo kaliya la reebi doono kuwa ka tirsan Ciidamada AMISOM.
Ciidamada Itoobiya ayaa durba bilaabay inay kala baxaan Ciidamadooda qeybo kamid ah Soomaaliya, gaar ahaan Ceel Buur oo ka tirsan Galgaduud, sidoo kalana hoos tagto Maamul Goboleedka Galmudug.
Tallaabadaan iyo farrintaan ay Itoobiya soo gaarsiisay Dowladda Soomaaliya ayaa dhibaato ku noqon doonto qaar badan oo ka tirsan deegaanada Gobolada Bay, Bakool, Shabeelada Hoose , Gobolada dhexe iyo Jubhooyinka, waxaana meelaha ay Itoobiya ka bixi doonaan lacag cabsi qabaa inay la wareegan Ciidamada Al-Shabaab.
Dowladda Soomaaliya ayaa waxaa soo fuuli doono culeys weyn oo kaga imaan doono aagga ay baneyn doonaan Ciidamada Itoobiya, waxaana midaas ugu wacan xiriirka xun ee ka dhaxeeyo labada dowladood iyo Itoobiya oo dooneyso inay fashiliso Dowladda Farmaajo kana shaqeeneyso in goobo badan ay ka baxdo gacanta dowladda.